Things that go 'Boom!' ~ Butros Samatabbixinta Rashku - Butros Rescue Saga
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu anfacaya waxaad marin u leedahay in Butros Samatabbixinta waa Firecracker ah, Haddii aad eegto si xaq hoose ee shaashadda waxaad ka heli doontaa wax yar mitir in loo baahan yahay in la siiyo dhibcood, weyn isu-gaynta ugu fiican. Buuxi meter this by nadiifinta lebenkii oo u muuqdo in yar firecracker, this yar jawharad waa mid aad u qiimo badan, si fudud u farta ugu khaanadda u baahan tahay in ay nadiifiso (sida mid ka mid ah la cawl eey yar ee weershe ah on top oo ku saabsan in la saadaaliyay off) iyo column this oo ay ku jiraan sanduuq kasta oo bir ama xaaladaha galaas waxay noqon doontaa destroyed..except for lebenkii qafis ama xiran, waxay u baahan yihiin ugu horeysay furayay.
Waxaad isku toosin kartaa cracker la column saxda ah iyo dooro sax cagaaran in dabka!
news wanaagsan waa xayawaanka sida muuqata jecel rashka iyo arrin farxad leh kabsato iyada oo qaraxa iyo scurry off ugu hooseysa (*la soco this ma khuseeyo nolosha dhabta ah, eeyaha ugu daran yihiin pyrotechnophobes!). Barashada sida loo dhaqso ah oo waxtar u abuuraan risaasta, kuwaas oo ogaa goorta la isticmaalayo iyo goorta la soo deldeshaan iyaga laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah xirfadaha ugu weyn ee kulankaan!
Waxaad leedahay siinin si ay u isticmaalaan Firecracker sida ugu dhakhsaha badan ay u muuqato, ay uusan meelna laakiin maanka ku hayo in aad qabto karaa oo kaliya hal mar, dhibco dheeraad ah waxaad kasban aan la kaydin doonaa mitirka. Waxaad bilaabi kartaa oo kaliya ku muteystay cracker kale mar kii hore ayaa loo dhigay off. Sababtoo ah waxaan this sida ay u dhigay off buskudka aan sida ay u muuqdaan. Haddii aad leedahay xawayaan nuugi geeskeeda ka mid ah dhulka ama biibiile aad isaga garaac kartaa off by gelinayn firecracker a ilaa column si ay bidix (Ha i weydiin sababta xayawaanka siinin fall in ay xaq u!)
Dejinta off cracker a si fudud waa arrin midkood xulashada sax cagaaran, ama haddii aad bedesho maskaxdaada oo aad rabto inaad soo deldeshaan in ay kaliya ku dhufatey 'X' cas. Maskaxda ku hay in blocks ka siinin mar walba u dhacaan si toos ah, waxay u janjeera in ay photographers galay meesha bannaan ee, taas oo inta badan alaabtii boolida kartaa jeexdin haddii aad isku dayayaan in ay qotomiyey qaar ka mid ah isu-gaynta weyn. Haddii blocks yihiin hoose ee guddiga waxba korkooda in la buuxiyo bannaan ee ay kici badan (mar bidixda) oo ay ku biiraan ilaa wixii blocks kale hartay . Tani waa mid aad u anfacaya in maskaxda lagu hayo gaar ahaan marka aad u baahan tahay in ay nadiifiso boqolkiiba gaar ah oo blocks jidka ka si ay u gutaan aad Ujeedada.
Filed Under: Game, I caawi Tagged: risaasta